Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti! | Aarsaa сімвалы міністэрства Haaraa Новы Запавет
Jalqaba Jecha маны jedhu Duree як Yoo матэрыі як irraa fudhannee ilaalle: Mana jechuun kan namni, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu jenne fudhachuu ni dandeenya. Yeroo Jecha маны jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan аб ISAAA з'яўляецца jijjirama.
Мана qulqulummaa jechunis Wanti qulqulluun бычок нацыянальнай ka'amu yookin ў калонцы ў калонцы jiraatu jechuudha. Манни qulqullummaa зрабіць immoo ІКТ abbummaan gaafatummaa ў е Валі кан Акка ні пра Waaqayyo hubbana. Maaliif jenne yoo gaafannee ‘ani qulqulluudha’ jedhe ofi isaaf kan dhugaa ba’e Waaqayyo qofa waan ta’eef. Haa ta’u malee Waaqayyo akka isaatti qulqulluu akka tanu yeroo hundumaa ni barbaada. Kanaaf akka ani qulqulluu ta’e isinis qulqulloota ta’a jedhe kan nu abboomeef.
Akkuma Waaqayyo nu jaallate nus Waaqayyoon ni jaallannaa ree? Dubbiin Waaqayyo Garu: ‘Eenyu illee yoo na jaallate dubbii koo immoo ni rawwata, abbaan immoo з бацькам jaallata; nuyis (Вады, Abbaa, Hafuura Qulqulluu) isa bira ni dhufna, iddoo jireenyaas сябе Біра ш Godhana ' (Yoh.14:23). Sagaleen kun akka nu barsisutti Waaqayyoon warra jaallatan, sagalee пекла rawwachuudhan, Waaqayyo iddoo buufata пекла, iddoo jireenya аб ISAAA з'яўляецца godhata jechuudha. Waaqayyo akkuma пекла скуры Bakkā qulqulluu месца. ’Manni qulqullummaa Waaqayyo immoo Waaqayyoolii tolfamanii wajjin walii galtee malii qabu? Waaqayyo jiraatadha, nuyis маны qulqulluummaa isaati ".
Kanaaf Waaqayyo akkas nun jedhe: Ані ISIN Біра НАН buufadha, ISIN jiddus НАН deddeebi'a, нават Waaqayyo keessan знакі Та'а сэрвіс дастаўкі сёння taatu (2Qor.6:16). Nu erga mana qulqulluummaa Waaqayyo taanee, mana hafuurri Waaqayyo keessa boqatu kana qulqulluummaati ni eegnaa ree?
Hafuurri Waaqayyo Yoo dhuguma ISIN keessa jiraate, Malee hafuuraatti Акка Акка ISIN feedha fedha foonitti час jiratan; Нашмат hafuura Кристос з keessaa цане qabne нацыянальнай Кристос МВТП (Рым 8:9). Гару ISIN гэта AKKA ня qulqulluummaa Waaqayyo taatan, hafuurri Waaqayyoos akka isin keessa buufatee jiru hin beektanii ree? (1Qor. 3:16).
Maqaa Йесус Gooftaatiin; Амін.
Тэсфае Ayyano Тийн
Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti! — 4 каментары
Addisuu Baqqalaa на Ліпеня 18, 2015 у 10:15 я сказаў:
deriba fufa на Можа 10, 2015 у 6:44 я сказаў:
deriba fufa на Можа 10, 2015 у 6:38 я сказаў:
Bultuma Itana на Сакавік 12, 2015 у 5:39 я сказаў: